One Body, One Lens….! (ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမှု ဆိုင်ရာ) | Freedom News Group
by FNG on July 20, 2012	by Aperture21 | Lives Beyond The Light
Full frame shootout: Review of Nikon D4, Nikon D800, and the Canon 5D Mark III (thetechblock.com)
How to Scroll through Images with Rear Dial onaNikon D7000 (likeaCanon DSLR) (jimmydaly.com)
Phocus iPhone4Adapter Allows You To Use Nikon Or Canon EOS Lenses (geeky-gadgets.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	From: နည်းပညာ သတင်း, ဘာသာပြန်	← ၆၅ နှစ် မြောက် အာဇာနည် နေ့မြန်မာ နိုင်ငံ တ၀ှမ်း တွင်ကျင်းပ | Photo Gallery
၂၀၁၃ မှာ ထင်ရှားလား မယ့် ပြက္ခဒိန် ကြော်ငြာ မော်ဒယ်များ →
Ko Alter #
Nikon COOLPIX P500 ကိုင်ထားတယ်အကို အသုံးဝင်ပြီးကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ပြောပြစေချင်ပါတယ်
July 21, 2012	zarni #
fuji finepix HS20EXR ရဲ့အားသားချက် အားနည်းချက်လေးများသိချငိလိုပြောပြပေးပါအုန်းခငိဗျာ။။။
July 20, 2012	Lwin UHan #
So good lens.Where can find those in YGN?
July 20, 2012	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	8,371,381 hits
ခေတ်ကိုက လဘာဂျာခေတ် လှုသတ်သမားကပန်းချီပြခန်းဖွင့် အမှတ်မရှိ ဂျလေဘီတသိုက်ကတော့တရုံးရုံး fb.me/2Bqi339Jd 11 hours ago
မူဆယ်မှာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူတစ်ဦးသေ fb.me/D7ft5oH7 1 day ago
နေ့ တိုင်း ဗီဒီယို ရုပ်သံ နဲ့တင်ဆက် ပေး သွား ပါမယ်။... fb.me/tKtTjYXp2days ago